အချစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ Phrasal Verbs လေးများ
16 Aug 2017 . 6:30 PM
ဒီအပတ်ပြောပြမယ့် Phrasal Verbs လေးတွေက နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ချိန်းတွေ့တာ၊ ချစ်တာကြိုက်တာနဲ့ နမ်းတာတွေကို Phrasal Verbs လေးတွေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြလို့ရတယ်ဆိုတာကို ပြောပြမှာမို့လို့ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းက စိတ်ဆိုးတာနဲ့ ခရီးထွက်တာကို ပြောပြပြီးပြီးဆိုတော့ ဒီအပတ် ချစ်ခန်း၊ ကြိုက်ခန်းဖက် ခဏလှည့်ရအောင်။
တစ်ယောက်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်၊ ကြိုက်နေပြီလို့ပြောချင်ရင် hit on လို့သုံးပါတယ်။
e.g. Htet Htet says it looked like the guy was hitting on Ei Ei.
စိတ်ဝင်စားတယ်၊ ကြိုက်နေပြီကို နောက်တစ်မျိုး flirt with လို့သုံးပါသေးတယ်။ အပျော်ရည်းစားထားတာ ကို ပြောချင်ရင်လည်း သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အပြင်မှာတွေ့ဖို့ချိန်းတယ်။ Date လုပ်ဖို့ချိန်းတယ်ဆိုရင်တော့ ask out လို့ သုံးပါတယ်။
e.g. Ei Ei says the guy asked her out.
တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ Date တယ်ဆိုရင် ask out ကို ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ Activity တွေနဲ့ အခုလိုတွဲသုံးလို့ ရပါသေးတယ်။
(1) He asked her out for lunch/dinner.
(2) He asked her out for coffee.
(3) He asked her out for drink.
(4) He asked her out foramovie.
မျှော်လင့်ချက်ပေးတယ်၊ ကြိုးရှည်ရှည်လှန်ထားတယ်ဆိုတာ သမီးရည်းစားကိစ္စတွေမှာ တော်တော်အပြောများ တဲ့ကိစ္စပါ။ အဲ့ဒီလိုပြောချင်ရင် lead on လို့သုံးလို့ရပါတယ်။
e.g. Ei Ei says she’s not sure if she likes the guy, and she doesn’t want to lead him on.
သမီးရည်းစားနှစ်ယောက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သဟဇာတဖြစ်တယ်။ စိတ်သဘောထားခြင်းတိုက်ဆိုင်
တယ်လို့ပြောချင်ရင် hit off လို့သုံးလို့ရပါတယ်။
e.g. Ei Ei says that she and her last boyfriend didn’t hit it off.
ချစ်မိသွားတာကို fall in love လို့ သုံးပြီး ကွဲသွားတာကတော့ spilt up (ဒါမှမဟုတ်) break up လို့သုံးပါတယ်။
e.g. Why Ei Ei and her last boyfriend spilt up?
ချစ်သူခြင်းလမ်းခွဲရတယ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တဖြည်းဖြည်းအမြင်မတူတာကနေ စပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းအမြင်မတူတော့တာကို drift apart လို့ပြောပါတယ်။
e.g. Ei Ei says that the breakup was because she and her boyfriend drifted apart.
နောက်တစ်ခုက လူတစ်ယောက်နဲ့ ပါတီတစ်ခုမှာ တွေ့တယ်။ အဲ့ဒီညမှာပဲ မျက်စိကျသွားပြီး အတူနေဖြစ်တာကို hook up လို့သုံးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရတာနည်းပေမယ့် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ ခေတ်စားတဲ့ အလေ့အထတစ်ခုပါ။
e.g. Ei Ei’s last relationship wasanightmare. It started when she hooked up with someone ataparty.
ရန်ဖြစ်ပြီး ပြန်ချစ်တာကို ပြောချင်ရင်တော့ make up လို့သုံးပြီး သည်းခံဖို့ခက်တာကိုတော့ put up with လို့ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
e.g. Ei Ei stayed with the boyfriend for six months, when they were constantly fighting and making up.
e.g. It wasadifficult relationship, and Ei Ei says she doesn’t know how she put up with him for so long.
လိမ်တာညာတာက သမီးရည်းစားအချင်းချင်းလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ cheat on လို့ခေါ်ပါတယ်။ အားရပါးရ နမ်းတာကိုတော့ making out with လို့သုံးပါတယ်။
e.g. The relationship ended when the boyfriend cheated on Ei Ei because she discovered him making out with his ex-girlfriend.
အခဈြနဲ့ဆိုငျတဲ့ Phrasal Verbs လေးမြား
ဒီအပတျပွောပွမယျ့ Phrasal Verbs လေးတှကေ နညျးနညျးစိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးပါလိမျ့မယျ။ ခြိနျးတှတေ့ာ၊ ခဈြတာကွိုကျတာနဲ့ နမျးတာတှကေို Phrasal Verbs လေးတှနေဲ့ ဘယျလိုမြိုးဖျောပွလို့ရတယျဆိုတာကို ပွော ပွမှာ မို့လို့ပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့အပတျတုနျးက စိတျဆိုးတာနဲ့ ခရီးထှကျတာကို ပွောပွပွီးပွီးဆိုတော့ ဒီအပတျ ခဈြခနျး၊ ကွိုကျခနျးဖကျ ခဏလှညျ့ရအောငျ။
တဈယောကျယောကျကို စိတျဝငျစားတယျ၊ ကွိုကျနပွေီလို့ပွောခငျြရငျ hit on လို့သုံးပါတယျ။
စိတျဝငျစားတယျ၊ ကွိုကျနပွေီကို နောကျတဈမြိုး flirt with လို့သုံးပါသေးတယျ။ အပြျောရညျးစားထားတာ ကို ပွောခငျြရငျလညျး သုံးလရှေိ့ပါတယျ။ အပွငျမှာတှဖေို့ခြိနျးတယျ။ Date လုပျဖို့ခြိနျးတယျဆိုရငျတော့ ask out လို့ သုံးပါတယျ။
တဈခုခုလုပျဖို့ Date တယျဆိုရငျ ask out ကို ကိုယျလုပျခငျြတဲ့ Activity တှနေဲ့ အခုလိုတှဲသုံးလို့ ရပါသေးတယျ။
မြှျောလငျ့ခကျြပေးတယျ၊ ကွိုးရှညျရှညျလှနျထားတယျဆိုတာ သမီးရညျးစားကိစ်စတှမှော တျောတျောအပွောမြား တဲ့ကိစ်စပါ။ အဲ့ဒီလိုပွောခငျြရငျ lead on လို့သုံးလို့ရပါတယျ။
သမီးရညျးစားနှဈယောကျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ သဟဇာတဖွဈတယျ။ စိတျသဘောထားခွငျးတိုကျဆိုငျ
တယျလို့ပွောခငျြရငျ hit off လို့သုံးလို့ရပါတယျ။
ခဈြမိသှားတာကို fall in love လို့ သုံးပွီး ကှဲသှားတာကတော့ spilt up (ဒါမှမဟုတျ) break up လို့သုံးပါတယျ။
ခဈြသူခွငျးလမျးခှဲရတယျဆိုတာ တဈယောကျယောကျနဲ့တဈယောကျ တဖွညျးဖွညျးအမွငျမတူတာကနေ စပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုမြိုးတဖွညျးဖွညျးအမွငျမတူတော့တာကို drift apart လို့ပွောပါတယျ။
နောကျတဈခုက လူတဈယောကျနဲ့ ပါတီတဈခုမှာ တှတေ့ယျ။ အဲ့ဒီညမှာပဲ မကျြစိကသြှားပွီး အတူနဖွေဈတာကို hook up လို့သုံးပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာတှရေ့တာနညျးပမေယျ့ အနောကျနိုငျငံတှမှောတော့ ခတျေစားတဲ့ အလအေ့ထတဈခုပါ။
ရနျဖွဈပွီး ပွနျခဈြတာကို ပွောခငျြရငျတော့ make up လို့သုံးပွီး သညျးခံဖို့ခကျတာကိုတော့ put up with လို့ပွောလရှေိ့ပါတယျ။
လိမျတာညာတာက သမီးရညျးစားအခငျြးခငျြးလုပျလရှေိ့တဲ့ ကိစ်စတဈခုပါ။ cheat on လို့ချေါပါတယျ။ အားရပါးရ နမျးတာကိုတော့ making out with လို့သုံးပါတယျ။